Lahatsoratra nataon'i Kyle Christensen ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Kyle Christensen
Tadidio rehefa nanolotra ny fampielezan-keviny Just Do It i Nike? Nike dia afaka nahavita fahatsiarovan-tena tamin'ny marika sy mizana tamin'ity teny filamatra tsotra ity. Takela-by, TV, radio, pirinty… 'Just Do It' ary ny Nike swoosh dia n'aiza n'aiza. Ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra dia nofaritan'ny isan'ny olona izay azon'i Nike nahita sy nandre izany hafatra izany. Ity fomba fiasa manokana ity dia nampiasain'ny ankamaroan'ny marika lehibe nandritra ny varotra na 'vanim-potoanan'ny fampielezana' ary tamin'ny ankapobeny